बढ्दाे राजधानीमा अपरिचितकाे शरीर अंङ्ग प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सकस ? - Nepal No 1 News - Bishwokhabr.com
बढ्दाे राजधानीमा अपरिचितकाे शरीर अंङ्ग प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सकस ?
काठमाडौं । भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा एउटा शव भेटियो। स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर हेर्दा टाउको काटेर शरीरमात्र फ्याँलिएको रहेछ। प्रहरीले शवको पहिचान गर्न खोज्यो। डेढ वर्ष बितिसक्यो त्यो शरीर कसको हो, परिचय खुलेन।
ुशरीरको भागमात्र भेटिएको थियो। त्यसैले मृतकको अन्य पहिचान खुलेन। अहिले पनि हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं,ु एसएसपी खापुङले भने।
ुहाम्रो पहिलो प्राथमिता भनेको शव पहिचान नै हो। त्यसपछि किन हत्यारु कसले हत्या गर्‍यो भन्ने खोजी गर्ने हो,ु महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले भने।
ुयस्तो अनुसन्धानमा धेरै च्यालेन्ज हुन्छ। व्यक्तिको सनाखतबाट नै हत्यारासम्म पुग्न सकिने सजिलो बाटो हो। तर, अन्य अनुसुन्धानको पाटो पनि छ,ु पूर्व डीआईजी ठकुरीले भने।
मंगलवार बोरामा शरीरको घुँडाभन्दा तलको भागमात्र फेला परेको छ। शरीरका बाँकी भाग कहाँ गएरु यदि हत्या गरेर शव व्यवस्थापनका लागि यसरी नै शरीर टुक्रा पारेर फ्यालेको भए शरीरका अन्य भाग पनि भेटिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र वा अन्य जिल्लामा यस्ता शरीरका भाग भेटिए त्यसलाई पनि डीएनए प्रोफाइलिङ गरेर भिडाउन सकिन्छ।
ुअब त देशका कुनै ठाउँमा शरीरको बाँकी अंश भेटिए शंकाको दृष्टिले हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ: ठकुरीले भने।
अपराध र शवको पहिचान लुकाउन हत्याराले शरीरलाई टुक्राटुक्रा पारेर देशका विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याएको उदाहरण समेत छन् नेपालको सन्दर्भमा। जसको चर्चित उदाहरण हो ( ख्याती श्रेष्ठ हत्या प्रकरण। २०६६ जेठ २२ मा अनामनगर बस्ने १९ वर्षीया ख्याती श्रेष्ठ हराइन्। त्यसपछि उनको अपहरण भएको भन्दै अपहरणकारीले फोन गरेर परिवारसँग फिरौती रकम मागे। अपहरण भएको १७ दिनपछि प्रहरीले विरेन श्रेष्ठलाई सोह्रखुट्टेबाट पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ पछि श्रेष्ठले पुतलीसडकबाट ख्यातीलाई सोही दिन आफ्नो खुसिंबुको कोठामा लगि कफीमा बेहोस हुने औषधि हालेर खुवाई रडले टाउकोमा हानी हत्या गरेको खुलेको थियो।